Shiinaha Customized cnc mashiinka qodista, Factory - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Mashiinka CNC Mashiinka CNC > mashiinka qodista cnc
Faa'iidooyinka processing lathe
CNC lathe adoo ku dhejinaya gawaarida gawaarida gudbinta gawaarida, maxaa yeelay kubbadda kubbadda waxay yeelan kartaa faragelin, gudbinta bilaa nadiifin, saxsanaanta badanaa waxay kuxirantahay mashiinka mashiinka laftiisa iyo barnaamijka si loo hubiyo. In geeddi-socodka howsha si otomaatig ah loo cabbiri karo, isla markaana si otomaatig ah u magdhabi karo qalabka duugga ah iyo sababaha kale ee qaladka. Markaa tayada wax-soo-saarku way wanaagsan tahay, saxsanaantu way deggan tahay.
Astaamaha lagu farsameeyo lathe
Lathe caadi ah waxaa wada geerka iyo lowska ku marooji dariiqyada caadiga ah. Sababtoo ah waxaa jira farqi u dhexeeya labada lamaane ee dhaqdhaqaaqa, oo ay weheliso hawlgalka gacanta ma aha mid sax ah, markaa saxsanaanta ku celcelintu way hooseysaa. Qiyaasta lathe guud waxay u baahan tahay in la joojiyo cabirka gacanta ka dib, qaladka cabirku waa weyn yahay, iyo waxtar yar. Ku habboon dufcad yar, shuruudaha saxda ah ma ahan kuwo sarreeya, qaybo dayactir ah. Maalgashiga lathe CNC wuu ka hooseeyaa kan lathe CNC, laakiin wuxuu ubaahan yahay xirfado hawlgal oo sare oo shaqaalaha ah, sidaa darteed heerka mushaharku wuu sarreeyaa. Qiyaasta duugga ah iyo wax soosaarka shaqaale heer hoose ah ayaa ku siin kara madax xanuun.
Calaamadaha kulul: Mashiinka qodista cnc, Shiinaha, Gawaarida, Soosaarayaasha, Warshad